Khumayani iyo Boko Haram maxaa kala haysta?! – Bashiir M. Xersi
Khumayani iyo Boko Haram maxaa kala haysta?!
Date: 16 Jun 2014Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Haddii labadii maalin ee fasaxa ahayd ay ii dhammaatay, ee aan ku laabtay hawl maalmeedkaygii caadiga ahaa, anoo u takara dhabanaya sidii arday subax Sabti ah Sarbi u geeyey Macallin Basbaas oo kale.
Waaberigii ayaan ka kacay sida caadada ii ah, waxaan sameeyey jimicsi iyo xoogaa orod ah, oo aan si joogta ah u sameeyo maalin walba, inta aanan shaqo iyo aadin hawl kalaba.
Jimicsigii iyo jirdhiskii markii uu dhammaaday, ayaan aaday ballan yar oo aan lahaa, sida lagu yaqaannay ba maalinta barkeed halkaa ayey iiga dhammaatay, oo guriga waxaan ku soo laabtay xilliga qadada, haddaan afka wax yar ku dhiftay, oo aan cabbaar nastay, ayaan shaqo galabeed oo aan lahaa u sii degdegay.
Inta aanan guriga ka bixin, ee aan ku jiray nasiinada yar, ayaa anoo dhex wareegaya isku xirahayaasha bulshada (Social Network) waxaan duljoogsaday dhawr war ku wada saabsan dagaal iyo dirir; Soomaaliya; Koofur iyo Waqooyi, Kenya, Ciraaq, Suuriya, Ukrayn oo Gaaskii laga goosanayo IQKB markaa baan ba gebii ahaanba iska xiray si aanan ugu sii dacaroon.
Labadii galabinimo ayaan shaqadii galay sida mar walba oo aan galab galayo ay ii ahayd caadaba. Mar aan ku jiray wax laba saac dhan ayaa waxaa soo dhawaaqay teleefonkaygii. Anoon ballan iyo sugayn qof i soo waca, ayaan markii uu ii soo baxay magaca Same ayaan ka qabtay anoo is iri, armaa dhib ku dhacay, waa kii shalay sii liicliicayee.
Markii aan ka qabtay teleefonkii, ee aan is salaannay, ayaan ku iri: “War Same, ma dhibbaa jira? Xaaladdu ma daggan tahay?” markaa buu inta qoslay igu yiri: “Haye, ma walwalkaagii ayaad billowday, miyaan lagu soo wacan karin?”.
Xoogaa anoo dhibsaday warcelintiisa ayaan ku yiri: “Walwalkayga inta iska dhaaftid, ma wax daran ayaa jira, oo aad xilligan ii soo wacday?” Inta mar kale qoslay ayuu igu yiri: “Madaama aan kaa wayey maqaayaddii aad shahaaha ku qaadan jirtay, ayaan is iri; bal meesha uu joogo weydii!”.
Inta si rasmi ah u xanaaqay ayaan ku iri: “Samow, in badan ayaan kugu yiri; xilli xun iyo habeen ha i soo wicin, haddii aysan wax daran iyo dhib jirin, walise waxaad mooddaa inaysan dhaga daloola helin warkaa”.
Markaa buu inta xoogaa is gartay igu yiri: “Bashiir, dee saaxiib waa uun ku soo tebay, ee wax kale ha u qaadan, hana iga xumaan dee, haddaan kaa qaldamay ka raalli noqo” markaa baan ku iri: “Haddaan ka qaldamay ma ahane, horta waad iga qaldantee, bal taa qiro, ta kale, adigu malaha hadalku mar walba gees ayuu kaa maraa ayaan u malaynayaa?”
“Waan kuu jeedaa xoogaa waad iga yara carootee, aan kaa hordhecee, galabta: Khumayani iyo Boko Haram maxaa kala haysta?!“ ayuu igu yiri. Markaa baan ku iri: “War nin yahow labada dacal ayey kala joogeene, maxaa isu geeyey, ma dagaalladii aan saaka wararka ku arkayey ayey qayb ka yihiin?”.
Markaa buu inta qaddar aamusay, igu yiri: “Horta bal sheekada nala wadaag, waxaan ba kaa waayey nala garo ujeedkee, balse, tani in kasta oo aysan dagaal ahayn, haddana, waxba ma dhaanto, oo qolo un bay guushu raacee”.
“Ha raacdo ma xumee, horta amaa madaxa la isla galayaa, oo herti iyo darbo la isku geynayaa?” ayaan ku iri. Saa wuxuu igu yiri: “Haa, nabee, inta la si haraato, oo la is heriyo ayaa waliba raaxada la iskaga qaadaa”
Markaa baan ku iri: “Haddi rajo iyo qaab ma lahan, ma iyadaa dagaal wax dhaanta, aasne ku weydiiyee maxaad uga jeeddaa?” markaa buu yiri: “Caawa waxaa jirta ciyaar…” markaa baan ku yiri: “Ma wali iyo ciyaar, haddii aad Diiq, Caano, iyo Baasta ii sheegtay, galabtana, ma waxaad keentay Khumayni iyo Boko Haram?”.
“Haa, caawa waxaa ciraaya Nayjeeriya iyo Iiraan” ayuu igu yiri. Wuxuuna ii soo raacshay: “Anigu Nayjeriya ayaan la jiraa, saa anigu SHIICO taageeri maayee, maalin walba Saxaabada iyo caynaysa Aalu baydkee!” markaa baan ku iri: “Waxaad hadashaba hadda ayaad dacar ka wareegtay, waaba ciyaaree, maa dooqaaga ku caana maashid, adoon u eegin waxa uu yahay iyo sida uu yahay. Ta kale, horta ma ogtahay in ay jiraan SHIICO soomaali ah, oo kuwaana see ka yeeli doontaa? Ta xigta, saw ma ogid in dawladda Iiraan magaceeda uu ku lammaansan yahay ISLAAM?”
Markaa buu yiri: “Bashiir, Falsafaddaada dhinac igala mar, ee anigu nabee inaan SHIICO soo dhawaysanayn, ee wax kale ii sheeg.” Markaa baan ku iri: “Wixii laguu sheegay ama aad ku soo barbaartay ma ahane, wax dhaafsasiin ma hayside, wax aan kaala yaabo ma lahan, ee bal hawl ayaa ii taallee, aad baan kuu salaamayaa, dhafarka badanna iska yaree, xasuusnowna, inaan wali kaa sugayo macnaha FISAHA”.
Sidaas ayaanna ku macsalaameeyey Same, oo aan telka miiska dulsaaray, anoo leh, wax qarriban, waa nin ciyaari madax martay, sidii ay waallidan Koobka Aadduunka lagu sheegayna u billaabatayna waaba uga sii dartay.
Previous Previous post: Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday!
Next Next post: Maansada: Qurbajoog